Wararka - Shenzhen SOSLLI Technology Co., Ltd. profile
Shenzhen SOSLLI Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2011. Waa shirkad farsamo sare ku takhasustay R&D, soosaarka iyo iibinta baytariyada lithium. Waxay hadda leedahay saddex qaybood oo ganacsi ah: waxsoosaarka unugyada batroolka lithium, qeybinta badeecada, iyo sumadeeda gaarka ah SOSLLI. Waxyaabaha ugu waa weyni waa baytariyada polymer lithium, batteriga dhuuban ee aadka u dhuuban iyo kuwa aadka u yar, baytariyada moodeellada qaab-dhismeedka moodeelku leeyahay, ilaha mobilada, 18650 baakadaha batari litium, baytariyada gawaarida korantada, bateriyada tamarta-dareeraha ee loo yaqaan 'nickel-steel hydride batteriga' iyo baytariyada kale. Alaabada shirkadda ayaa laga iibiyay dalal badan iyo gobollada Aasiya, Yurub, Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Hong Kong iyo Taiwan.
Shirkadda waxay leedahay in kabadan 1,600 oo shaqaale wax soo saar ah, 110 shaqaale tayo leh, iyo in kabadan 65 shaqaale xirfad iyo farsamo; inta badan maamulayaasha shirkaddu waxay ka yimaadeen shirkado caan ah oo caalami ah. Shirkaddu waxay leedahay 18650 khadadka wax soosaarka otomaatiga ah, 14500 khadadka waxsoosaarka otomaatiga ah, iyo awoodda wax soo saarka maalin kasta in kabadan 100,000. Shirkaddu waxay u shaqaysaa si adag iyadoo la raacayo nidaamka tayada leh ee ISO9001: 2008, wax soo saarkiisuna way ka gudbeen CE.MSDS.UN38.3.ROHS. caddeyn. Qalabka cadayga ee korontada lagu isticmaalo, cadayga smart smart, maqalka Bluetooth, awooda mobilada, laydhka warshadaha warshadaha, baaskiil koronto, aaladaha tijaabada warshadaha, qalabka korontada ku shaqeeya, diyaarada moodada, alaabada dadka waaweyn iyo alaabada kale ee elektiroonigga ah. Tan iyo markii la aasaasay shirkadda, waxay diiradda saareysay hagaajinta tayada, xakameynta qiimaha iyo gaarsiinta waqtiga. Iyada oo adeegsiga qiimaha waxsoosaarka aad u fiican iyo adeegga wanaagsan, ay ku guuleysatay macaamiisha qanacsanaanta iyo wada shaqeynta muddada dheer, iyo si wada jir ah macaamiisha ula guuleystaan!
Daacadnimada, xoogga iyo tayada wax soo saarka ee Shenzhen Suosili Technology Co., Ltd. waxaa aqoonsaday warshadaha. Shirkadda ayaa xilligan xafiisyo iib ah ku leh Bartamaha Shiinaha, Bariga Shiinaha iyo Koonfurta Shiinaha si ay u siiso taageero farsamo oo 24-saac ah. Macaamiisha ugu waaweyn ee aan la shaqeyno waa: Panasonic, Philips, voltronicpower iyo noocyo kale oo caalami ah. Badeecadaha ayaa loo dhoofiyaa Yurub, Mareykanka, Australia, Afrika, Aasiya iyo qaybaha kale ee adduunka.
Si daacadnimo leh u soo dhowow macaamiisha guriga iyo dibeddaba inay kugu soo booqdaan shirkadda Suo Sili hagida, gorgortanka ganacsiga iyo horumarka guud!
Unugyada Baytariyada Lithium Ion, Xidhmada Aaladda Batteriga, Batroolka 20ah Lithium Ion, Battery Lithium Batteriga, Xidhmada Aaladda Batroolka Lithium, 3.6v Bathiil Lithium-Ion,